भारतमा बढ्दै कोरोना, कति पुग्यो मृतक र संक्रमित संख्या ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more भारतमा बढ्दै कोरोना, कति पुग्यो मृतक र संक्रमित संख्या ?
चैत २७ गते, २०७६ - ०८:२९
भारत । भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । बुधबार १८ जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकमा के छ ?
कोरोना संक्रमणका घटनाक्रममा घट्नेक्रममा भन्दा पनि बढ्ने क्रममा रहेको देखिएको छ । बुधबारभित्र संक्रमितको संख्या १५ लाख १७ हजार ९६० पुगेको छ भने ८४ हजार ३८४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
संक्रमणको सबैभन्दा ठुलो चपेटामा अमेरिका परेको छ । अमेरिकामा मात्रै ४ लाख ३४ हजार ९२७ जना संक्रमित छन् भने १४ हजार ७८८ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । दैनिकजसो ३० हजार बढी मानिसहरु संक्रमित हुने गरेको अमेरिकामा बुधबार पनि ३१ हजार ९३५ मा नयाँ संक्रमण देखिएको छ ।
‘अमेरिका बन्द गर्नका लागी बनेको होइन’ भन्दै घमण्ड गरिरहेका राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पले मानिसहरुको हेक्का नराखेको आरोप लागिरहेको छ । हुनपनि विश्वकै अति ठुलो संख्यामा संक्रमण हुँदा समेत अमेरिका लकडाउनमा छैन ।
यता युरोपियन मुलुकहरु इटली, स्पेन, फ्रान्स तथा जर्मनीमा संक्रमणका कारण निकै ठुलो मानविय क्षति भएको छ भने रोकथामका लागी चालिएका कदमहरु प्रर्याप्त भईरहेको छैन ।
यता चीनमा भने बाहिरबाट आएका मानिसहरुमा बाहेक संक्रमण नदेखिएको बताइरहेको छ ।
चैत २७ गते, २०७६ - ०८:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनका अवस्थामा भारतबाट जमिनमार्ग हूँदै स्वदेश फर्कनका लागी २० नाका तोकेको...
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमित एकैदिन आजसम्मकै धेरै संक्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या...
काठमाडौं । जेठ १० गते काठमाडौंको टेकु अस्पताल भर्ना भएका नुवाकोटका ३९ वर्षिय पुरुष शुक्रबार डिस्चार्ज...
कर : केमा घट्यो, केमा बढ्यो ?
काठमाडौं । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री...
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमण दर झनझन् बढ्दै गएको छ । बिहीबार विश्वभर एक लाख १६ हजार तीन...